SD oo xaflad caalamiya u qabanaysa dadka ay aragtiga wadaagan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
SD oo xaflad caalamiya u qabanaysa dadka ay aragtiga wadaagan
La daabacay torsdag 3 november 2016 kl 14.00
Grand Hotel ayuu SD ku qabanayaa xaflad caalami ah. sawir: Hasse Holmberg / TT
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa habeynimada jimcaha hotel ku yaala Stockholm ugu qabaneysa xaflad caalami ah dadka ay aragtida wadaagaan.
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa habeynimada jimcaha hotel ku yaala magaalada Stockholm ugu qabaneysa xaflad caalami ah dadka ay isku aragtida yahiin. Xafladaan ayaa lagu baxin doonaa bilad ay ugu magac dareen biladda xoriyadda.
Laakiin xeer-dheerayaal ayaa ku tilmaamey xafladdan SD mid ah ismuujin iyo ii dheh.
- Waxay doonayaan in muujiyaan in ay ka mid yahiin dhaq-dhaqaqyada midig ee Yurub, ayey tiri Ann-Cathrine Jungar oo ah mutacalimid dhanka culuumta siyaasadda.
Xafladan waxaa lagu qaban doonaa hotelka la yiraahdo Grand Hotel bartamaha Stockholm, xafladdan oo lagu marti qaadey dad kor u dhaafaya 300-400 oo ah ruux. Nigel Farage oo horey u ahaan jirey hoggaamiyaha xisbiga Ukip ee dalka Ingiriiska ayaa ka mid ah dadka lagu martiqaadey oo ka soo qayb-geli doona xafladan SD qabaneyso.
- Ka soo qayb-galayaasha intooda badan waa siyaasiin, ayuu sheegay Joakim Wallerstein oo dhanka warbaahinta u qaabilsan xisbiga SD.
Xafladdan xisbiga SD u qabanayo dadka ay isku aragtida yahiin waxaa lagu qaybin doonaan bilad loo baxiyey European Freedom Award oo la siin doona ruuxa dadaal ku baxiye ka hortagga iyo yareynta federaleynta EU.